मरिउपोल जित्दा के–के हासिल गर्दैछन् पुटिन ?
युक्रेनमा रणनीतिक महत्त्व बोकेको तटीय शहर मरिउपोल लगभग रुसको नियन्त्रणमा आएको छ ।
शहरको प्रतिरक्षा गरिरहेका छत्तीसौं मरिन ब्रिगेडका एक हजारभन्दा युक्रेनी सैनिकहरूले आत्मसमर्पण गरिसकेका छन् । युक्रेनी सेनामा रहेका उग्रराष्ट्रवादी नवनाजीहरूको समूह आजोभ बटालियनका लगभग तीन हजार योद्धाहरू आजोभस्टालमा लुकेर बसेका छन् । तिनीहरूसँगै नेटो मुलुकका सयौं विदेशी सैनिकहरू पनि छन् ।
आजोभस्टाल अर्थात् स्टील कारखाना र औद्योगिक क्षेत्रका भूमिगत संरचनामा नवनाजीहरूले अनेकौं मानिसलाई बन्धक बनाएर राखेकाले रुसी सैनिकहरूले सतर्कतापूर्वक कारवाही चलाउनुपरेको छ । सकेसम्म कम सर्वसाधारण मारिऊन् भनी रुसी सैनिकहरूले व्यापक क्षति बेहोरेर भए पनि सुस्त गतिमा कारवाही गरिरहेका छन् ।
अहिले रुसी सैनिकहरू मरिउपोलको घरघरमा गएर ‘क्लीनिङ अपरेसन’ गरिरहेका छन् । सर्वसाधारणको जस्तो भेष बनाएर नवनाजीहरू लुक्ने गरेकाले उनीहरूलाई घरघरमा गएर खोजी गर्नुपरेको हो । त्यसबाहेक भूमिगत संरचनामा लुकेर बसेका नवनाजीहरूलाई बाहिर निकालेर मार्न वा आत्मसमर्पण गराउन पनि रुसीहरूले कारवाही चलाएका छन् ।
नर्भ ग्यास उपयोग गरेर आजोभका योद्धाहरूलाई भूमिगत संरचनाबाट बाहिर निकाल्ने योजना बनेको पनि कतिपयले बताएका छन् ।
रुसले यसरी ग्यास उपयोग गरेर सुरक्षा कारवाही पहिले पनि चलाइसकेको छ । सन् २००२ मा रुसको राजधानी मस्कोमा रहेको दुभ्रोव्का थिएटरमा चेचेन विद्रोहीहरूले दर्शकहरूलाई बन्दी बनाएर राखेका थिए । रुसी सुरक्षाकर्मीहरूले अज्ञात रासायनिक पदार्थलाई भवनको भेन्टिलेसन सिस्टमबाट पठाएर बेहोश बनाई उद्धारकार्य गरेका थिए । तर त्यसक्रममा ४० लडाकूसँगै १३० जना बन्दी पनि मारिएका थिए ।
मरिउपोलमा मानवढाल बनाइएका सर्वसाधारण नमारिऊन् भनी रुसी सेनाले अतिरिक्त सतर्कता अपनाउने बताइएको छ ।
मरिउपोल नियन्त्रणमा लिएपछि अब रुसलाई डोनबास क्षेत्रमा आक्रमण बढाउनका लागि सजिलो हुने भएको छ । अहिले मरिउपोलमा खटिएकामध्ये आधा जति सैनिकलाई अब उत्तरतर्फ डोनबासमा पठाएर त्यहाँ रहेका सैनिकलाई थप बलियो बनाउने (रिइन्फोर्स) रुसको योजना देखिन्छ ।
त्यसो त मरिउपोलमाथिको विजय मात्रले पनि रुसलाई ठूलै रणनीतिक लाभ प्राप्त हुनेछ । रुसले सन् २०१४ मा हात पारेको क्राइमिया प्रायद्वीपलाई युक्रेनको डोनबास क्षेत्रसँग स्थलमार्गमार्फत जोड्ने कडी मरिउपोल नै हो । अब रुसले क्राइमियामा पहुँच पाउन जलमार्ग मात्र नभई स्थलमार्ग समेत प्राप्त गरेको छ ।
सन् २०१४ मै रुसले केही समयका लागि मरिउपोल नियन्त्रणमा लिएको थियो तर युक्रेनीहरूले प्रतिकार गरेपछि शहरलाई छोडिदिएको थियो ।
मरिउपोल युक्रेनको डोनेत्स्क क्षेत्र (ओब्लास्ट) मा पर्छ । रुसले मान्यता दिएको स्वतन्त्र राष्ट्र डोनेत्स्क जनगणतन्त्रकै एक भूभागका रूपमा रुसले मरिउपोललाई लिने गरेको छ ।
माथि उल्लेख गरिएको कुख्यात आजोभ बटालियनको मुख्य केन्द्र मरिउपोल नै हो । मरिउपोल नियन्त्रणमा लिएर आजोभ बटालियनलाई आत्मसमर्पण गराएमा रुसले आफ्नो विशेष सैन्य कारवाही सफल भएको भन्न पाउँछ ।
रुसका राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनले युक्रेनलाई नाजीविहीनीकरण गर्नका लागि सैन्य कारवाही चलाएको भन्दै आएका छन् । फासिवादी तथा नवनाजी समूह आजोभ बटालियनले वर्षौंदेखि पूर्वी युक्रेनमा रुसीभाषीहरूमाथि चरम दमन गरिरहेकाले त्यसका विरुद्ध कारवाही चलाउन आफू बाध्य बनेको पुटिनको भनाइ छ ।
यस शहरको आर्थिक महत्त्व पनि उच्च छ किनकि यहाँ विशाल फलाम र स्टील उद्योगहरू छन् । यस औद्योगिक क्षेत्रमा भारी यन्त्रहरू निर्माण गरिन्छन् तथा जहाजको मर्मतसम्भार पनि हुने गरेको छ । युक्रेनको सबभन्दा ठूलो स्टील कम्पनी मेटइन्भेस्टको केन्द्रीय कार्यालय पनि मरिउपोलमै छ ।
कब्जामा आएका आजोभ योद्धाहरूलाई रुसी टेलिभिजनहरूमा दयनीय अवस्थामा देखाएमा रुसका लागि सूचनायुद्धमा ठूलो विजय मिल्नेछ । रुसी जनतालाई युक्रेनमाथि सैन्य कारवाही चलाउनुको औचित्य साबित गर्न रुसलाई यसले राम्रो मसला दिनेछ ।
त्यसपछि आजोभ योद्धाहरूका विरुद्ध रुसले दोस्रो विश्वयुद्धपछिको नुरेम्बर्ग ट्रायल जस्तै न्यायाधिकरण गठन गरेर मृत्युदण्डको सजाय दिन सक्ने सम्भावना पनि छ ।
नियमित युक्रेनी सैनिकलाई युद्धबन्दीको व्यवहार गर्दै रुसले खानेकुरा तथा औषधि उपलब्ध गराएको छ । तर आजोभ बटालियनका नवनाजीहरूले यस्तो सुविधा नपाउन सक्छन् ।
आजोभलाई यसरी कब्जा गरेर मरिउपोल पनि नियन्त्रणमा लिँदा रुसी सैनिकहरूलाई निकै ठूलो मनोवैज्ञानिक लाभ प्राप्त भएको छ । यसबाट उत्साहित भएर उनीहरू डोनबास क्षेत्रमा सैन्य कारवाही बढाउन उत्साहित हुनेछन् ।
हुन त मरिउपोल ऐतिहासिक महत्त्वको शहर भएकाले पनि पुटिनले त्यसको नियन्त्रणलाई बढी जोड दिएका हुन् । अठारौं शताब्दीमा मरिउपोल नोभोरोसिया अर्थात् नयाँ रुसको एक हिस्सा थियो । दक्षिणपूर्वी युक्रेनमा ठूलो संख्यामा रहेका रुसीभाषीहरू बस्ने क्षेत्रलाई रुसले नोभोरोसिया भन्ने गरेको छ ।
पुटिनले रुसमा जारहरूको शासन चलेको बेलामा मरिउपोल, ओडेसा, खार्किभ, खेर्सन, डोनेत्स्क र लुहान्स्क लगायतका शहर रुसी भूभागमै पर्ने गरेको बताएका छन् । त्यसलाई पुनः रुसको नियन्त्रणमा ल्याउनु पुटिनको लक्ष्य हो ।
मरिउपोल आजोभ सागरकै सबभन्दा ठूलो बन्दरगाह हो । अनि मरिउपोल रुसको नियन्त्रणमा पुगेसँगै आजोभ सागरमा पूर्णतया रुसको कब्जा हुने भएको छ । यसबाट युक्रेन अर्धभूपरिवेष्ठित राज्य बन्नेछ किनकि रुसले युक्रेनको जलक्षेत्रीय व्यापारलाई पूरै बन्द गराउने क्षमता हासिल गरेको छ ।
मरिउपोल रुसको नियन्त्रणमा पुगेपछि युक्रेनको अर्थतन्त्रमा निकै ठूलो झड्का लागेको छ । युक्रेनको निर्यातमुखी अर्थतन्त्रमा बन्दरगाहहरूको उच्च महत्त्व छ त्यसैले मरिउपोल युक्रेनको हातबाट फुत्किनु उसका लागि धेरै ठूलो क्षति हो । मरिउपोल हात परेसँगै रुसले युक्रेनको घाँटी अँठ्याउन सक्नेछ किनकि आफ्ना सामान निर्यात गर्नका लागि युक्रेनले रुसको सदिच्छामा निर्भर रहनुपर्ने हुन्छ ।
मरिउपोल रुसको नियन्त्रणमा पुगेसँगै युक्रेनमा रुसले चलाएको सैन्य कारवाहीको पहिलो चरण सफल भएको देखिन्छ । अब रुसले डोनबास क्षेत्रमा पूर्ण ध्यान दिने विश्लेषण गरिएको छ । युक्रेनका एक लाखभन्दा बढी सैनिकहरू डोनबासमा छन् र उल्लेख्य संख्यामा विदेशी सैनिकहरू पनि त्यहाँ छन् ।
दोस्रो चरणको युद्धमा रुसले डोनबास नियन्त्रणमा लिने र नोभोरोसियालाई युक्रेनको नियन्त्रणबाट पूर्ण मुक्त गराउने लक्ष्य राखेको देखिन्छ । तर यसका लागि गरिने सैन्य कारवाही सहज हुने छैन र उल्लेख्य मात्रामा धनजनको क्षति हुने निश्चित छ ।
रुस-युक्रेन युद्ध लामै समय जाने संकेत : पुटिनले किन फेरे सैन्य कमान्डर ?
मिथिलामा आज सतुवाइन पर्व मनाइँदै